करको दायरा हेरफेर, कसलाई कति छुट ? - Nagarik Bahas
करको दायरा हेरफेर, कसलाई कति छुट ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८ समय: १९:१६:०३
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । करदातालाई उनीहरुको आयस्तरका आधारमा छुटको घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।